မေတ္တာနှင့် ဒေါသ | မေတ္တာရိပ်
← စိတ်ဝိညာဉ်မှာ အနှစ်ရှာ သမထဘာဝနာ
မေတ္တာ ဘာဝနာ ပွားများနည်း →
မေတ္တာနှင့် ဒေါသ	Posted on October 24, 2009	by mettayate ဗုဒ္ဓပေးသော အနိုင်ယူနည်း (၄) နည်း
“အမျက်ဒေါသ ထွက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်အား မေတ္တာ” ဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
“ယုတ်မာသောစိတ် ထားရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အား မြင့်မြတ်သော စိတ်” ဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
“နှမြောတွန့်တို သော ပုဂ္ဂိုလ်အား ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း” ဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
“မဟုတ်မမှန် လိမ်ညာ ပြောဆိုသူအား သစ္စာစကား” ဖြင့် အနိုင်ယူပါ။
တဏှာပေမ = တဏှာဖြင့် ချစ်ခင်ခြင်းသည် မောဟပြဌာန်းခြင်းရှိသော လောဘတရားတည်း။ အကုသိုလ်တရားစစ်စစ်ဖြစ်၏။
မေတ္တာပေမ = မေတ္တာဖြင့် ချစ်ခင်ခြင်းသည် ပညာပြဌာန်းခြင်းရှိသော အလောဘတရားနှင့် အဒေါသတရားနှင့်ယှဉ်သောကြောင့် မတွယ်တာ မကပ်ငြိဘဲ အေးမြကြည်လင်ချစ်ခင်ခြင်း သဘောရှိ၏။ ကုသိုလ်တရားစစ်စစ်ဖြစ်၏။
ဗုဒ္ဓသည် သတ္တ၀ါအားလုံး၏သန္တာန်တွင် ပြစ်မှားသောဒေါသစိတ်ကို တခါတရံမှ မဖြစ်စေချင်။ အေးမြသော မေတ္တာဓါတ်ကိုသာ အစဉ်အမြဲရှိစေချင်သည်။
“ရေသည် လူကောင်း လူဆိုးမရွေး
စင်ကြယ်အေးမြခြင်းကို ထပ်တူညီမျှ ပြုမူသကဲ့သို့
အကျိုးမဲ့ကြောင်း ပြုသူကို ဖြစ်စေ
ထားရှိနိုင်မှသာ ချမ်းသာရ၏။” ဟူ၍ ညွှန်ပြတော်မူခဲ့သည်။
မေတ္တာ၏ လက္ခဏ၊ ရသ၊ ပစ္စုပဌာန် ပဒဋ္ဌာန်လေးပါးကို စရိယာ ပိဋအဋ္ဌကထာ၌ –
၁) မေတ္တာသည် သတ္တ၀ါတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ကပ်၍ဆောင်သောအခြင်းအရားအားဖြင့် ဖြစ်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏။
၂) သတ္တ၀ါတို့ထံ အကျိုးစီးပွားကို ကပ်၍ဆောင်ခြင်းကိစ္စရှိ၏။
၃) အေးမြငြိမ်းချမ်းသော စိတ်သဘောထားလျှင် ဉာဏ်၌ရှေးရှုထင်လာတတ်သော အခြင်းအရာ ပစ္စုပဌာန် ရှိ၏။
၄) သတ္တ၀ါတို့၏နှစ်သက်ဖွယ်ရာ ဂုဏ်ကိုသယ ရှုမြင်တတ်သော ယောနိသောမနသိကာရ (အကောင်းမြင်ဝါဒ) လျှင် နီးစွာသောအကြောင်း ပဒဌာန် ရှိ၏။
မိမိ၏အကျိုးမဲ့ကို ပြုနေသူပင်ဖြစ်သော်လည်း ပြစ်မှားသောဒေါသစိတ်ကို အဖြစ်မခံရန်လည်း ဤကဲ့သို့ ဆုံးမတော်မူခဲ့သည်။
“ရဟန်းတို့ ယုတ်မာသောအကျင့်ရှိသူတို့သည် အရိုးနှစ်ဖက်တပ်သောလွှကြီးဖြင့် သင်တို့၏အင်္ဂါကြီးငယ်တို့ကို အကယ်၍တိုက်ဖြတ်ကုန်ငြားအံ့။ ဤကဲ့သို့တိုက်ဖြတ်ကုန်သော်လည်း ထိုခိုးသူတို့အား စိတ်ပြစ်မှားခြင်းကို သင်တို့မပြုအပ်။ ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်၍ စိတ်ပြစ်မှားသူသည် ငါ၏အဆုံးအမကို လိုက်နာသည်မည်။” (မဇ္ဈမနိကယ်၊ သြပမ္မ၀ဂ် ကကစူပမသုတ်၊ ၁၈၁)
သတ္တ၀ါတိုင်းတွင် ကိုယ်ဖြင့်ပြုသော ကာယကံ၊ နှုတ်ဖြင့်ပြုသော ၀စီကံ၊ စိတ်ဖြင့်ပြုသော မနောကံ ဟု သုံးမျိုးရှိရာ ကောင်းသောကံကိုသာ နှလုံးသွင်း၍ မေတ္တာပွားကြရန် အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်၊ အာဃာတ၀ဂ် ဒုတယအာဃာတ၀ိနယသုတ်၌ ဗုဒ္ဓက –
“မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မှော် ရေညှိများဖြင့် ညစ်ပစ်နေသောကန်မှရေကို သောက်ချင်လျှင် ဦးစွာရေညှိများကို ဖယ်ရှာပြီးမှ ရေကြည်သန့်သန့်ကို သောက်ရသကဲ့သို့ ထိုအတူ ကာယကံကောင်းပြီး ၀စီကံ မနောကံ မကောင်းသူဖြစ်ခဲ့လျှင် မကောင်းသော ၀စီကံ မနောကံ တို့ကို ဖယ်ရှား၍ ကောင်းသောကာယကံကိုကြည့်ကာ မေတ္တာပွားရမည်။”
“ပံသကူ = မြေမှုန့်အထပ်ထပ်ကို လိမ်းကျံသောသင်္ကန်းကို ဆောင်သောရဟန်းသည် သုံး၍မရအောင် မစင်ကျင်ကြီးများလိမ်းကျံကာ ဆွေးရိသောအစများကို ဖယ်ရှား၍ ကောင်းသောအစများကိုသာယူသကဲ့သို့ ထို့အတူ ၀စီကောင်းပြီး ကာယကံ မနောကံမကောင်းသူဖြစ်ခဲ့လျှင် မကောင်းသော ကာယကံ မနောကံများကို ဖယ်ရှား၍ ကောင်းသောဝစီကံကိုသာကြည့်ကာ မေတ္တာပွားရမည်။”
“ခရီးပန်းလာသော ခရီးသွားယောကျာ်းသည် နွားခြေရာခွက်၌ရှိသောရေကိုတွေ့လျှင် ၎င်းရေကို လက်ခုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ခွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ သောက်ပါမူ ထိုရေသည် လှုပ်ရှားပြီးလျှင် နောက်ကျုပေလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့် ရေကြည်ရေသန့်ကိုသောက်နိုင်စေခြင်းအကျိုးငှာ လက်ခုတ်၊ ခွက်တို့ဖြင့် မခပ်ယူပဲ လေးဖက်ထောက်ဝပ်၍ နွားကဲ့သို့သောက်ရသကဲ့သို့ မနောကံကောင်းပြီး ကာယကံ ၀စီကံ မကောင်းခဲ့လျှင် မကောင်းသော ကာယကံများ၊ ၀စီကံများကိုဖယ်ရှားပြီးကောင်းသော မနောကံကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် အာရုံပြု၍ မေတ္တာပွားရမည်။ “
“အကယ်၍ ကံသုံးပါးလုံးမကောင်းသူဖြစ်ခဲ့လျှင် သြော် . ကောင်းကံတစ်ခုမှ မရှိသောကြောင့် မကောင်းသောနေရာသို့ရောက်ရတော့မှာပါလားဟူ၍ သနားခြင်းကရုဏာကို ပွားများရမည်။”
“သံသရာတွင် အမိမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူ၊ အဖမဖြစ်ခဲ့ဘူး အစ်ကိုအစ်မ မဖြစ်ခဲ့ဘူး မရှိ။
ဤရန်သူသည် ငါ့၏အမိဖြစ်ခဲ့၍ ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားပြီး ငါ၏ကျင်ကြီးကျင်ငယ် နှပ်တံတွေးစသည်တို့ကို စန္ဒာကူး နံ့သာအသွင် စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းမရှိ သုတ်သင်ခဲ့ဖူးလေပြီ။
ဤရန်သူသည် ငါ့၏အဖဖြစ်ခဲ့၍ ငါ့အား ကုန်သွယ်ခြင်း လယ်လုပ်ခြင်း မငြိုမင်ြကျွေးမွေးခဲ့ဖူးလေပြီ စသည်ဖြင့် နှလုံးသွင်းကာ မေတ္တာပွားနိုင်ရမည်”ဟု ညွှန်ပြတော်မူခဲ့ပါသည်။
သူတစ်ပါးကို အညစ်အကြေးဖြင့် ကျဲပက်လိုသောသူသည် မိမိကိုယ်တိုင် အညစ်အကြေးကို ဦးစွာကိုင်တွယ်ရသဖြင့် မိမိသာလျှင်အရင်ဆုံးအညစ်အကြေးပေကျံရသကဲ့သို့ သူတစ်ပါးကို ဒေါသဖြင့်ပြစ်မှားလိုသောသူသည်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်ဒေါသ၏ဆိုးကျိုးများကို ဦးစွာခံစားရလေသည်။
ဒေါသတွင် အကြုံးဝင်သော ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း ကောဓ၏ အပြစ် (၇) မျိုး
၁) ရုပ်ရည်အဆင်းပျက်စီး၍ အိုစာလွယ်ခြင်း၊
၂) အိပ်ကောင်းခြင်း မအိပ်နိုင်ခြင်း၊
၃) ရရှိမည့်အကျိုးတရားများ လက်လွှတ်ရခြင်း၊
၅) အခြွေအရံများ ပျက်စီးဆုံးရှူံးခြင်း၊
၆) မိတ်ဆွေကောင်းများ ပျက်စီးဆုံးရှူံးခြင်း၊
၇) သေပြီးနောက် အပါယ်သို့သွားရခြင်း ဟူသော အကျိုးများကို ခံစားရမည်။
ထိုသူသည် ပထမဒေါသထွက်နေသူထက် မိုက်မဲသူ၊ ယုတ်မာသူဖြစ်၏။” (အပဏ္ဏကဇာတ် အဋ္ဌကထာ)
“လူဆိုတာ ခွေးလို မကျင့်ရဘူး။ ခြင်္သေ့လို ကျင့်ရတယ်။ ခွေးဆိုတာ ပစ်လိုက်တဲ့ခဲကိုသာ ကိုက်တတ်တယ်။ ပစ်တဲ့ရန်သူကို လိုက်မကိုက်တတ်တော့ ပစ်ရင်း ကိုက်ရင်းနဲ့လုံးချာလိုက်နေတော့တာပဲ။ ဘယ်တော့မှ မပြီးတော့ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ တချို့လူများဟာ ဒေါသဖြစ်ပြီး ရန်ရှာနေတော့ ရန်ရှာလို့ကို မပြီးနိုင်တော့ဘူး။”
“ခြင်္သေ့ကျတော့ ခဲ့ပစ်တဲ့သူကိုသာ တစ်ခါတည်းကိုက်သတ်ပစ်လိုက်တာ။ ခဲကို လိုက်ကိုက်မနေတော့ဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ ပညာရှိသူတော်ကောင်းများကျတော့ ဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာ ဒေါသမဖြစ်နေတော့ဘူး။ ဖြစ်လာမယ့်ဒေါသကိုသာ အပြစ်မြင်ပြီး မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ ထိန်းလိုက်တော့ အေးချမ်းသွားတော့တာပေါ့။”
ရာဇဂုရုမောင်းထောင် ဆရာတော် –
၀န်မနိုင် မေတ္တာသက်လုံပျက်သူ ဒေါသ အမြှုပ်ထွက်လွယ်သည်။”
ခန္တီဝန်မနိုင် – အလောဘသက်လုံပျက်သူ၊ ရာဂအမြှုပ်ထွက်လွယ်သည်။
သမထ၀န်မနိုင် – အမောဘသက်လုံပျက်သူ၊ မောဟအမြှုပ်ထွက်လွယ်သည်။
၀ိပဿနာဝန်မနိုင် – ဟိရီသြတ္တပ္ပသက်လုံပျက်သူ၊ ကိလေသာ အမြှုပ်ထွက်လွယ်သည်။
သီလ၀န်မနိုင် – သဒ္ဓါသက်လုံပျက်သူ၊ မစ္ဆေရအမြှုပ်ထွက်လွယ်သည်။
အညွန်း – မေတ္တာအစွမ်းအံ့မခန်းစာအုပ်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← စိတ်ဝိညာဉ်မှာ အနှစ်ရှာ သမထဘာဝနာ